FAALLO:-Baarlamaanka 10aad | Saadaal Media
Waxaa lagu soo doortay Baarlamaanka 10aad xarumaha dawlad-gobolleedyada dalka. Hannaanka iyo maamulka lagu soo doortay xubnaha, waxaa lagu tilmaamaa kii ugu musuqmaasuqa badnaa taariikhda Soomaliya. Laaluush, boob cad iyo gacan-qabad baa loo wada-adeegsaday soo xulitaankiisii. Marka laga eego xagga aqoonta, biseylka siyaasadda iyo dareenka wadaniyadda ee xubnaha Baarlamaanka maanta waa ay ka hooseysaan kii ka horreeyey. Waxaa lagu xantaa inay qiimaha Laaluushka bixin/qaadasho gaarsiiyeen meeshii u sarreysay!!
Qaabka hab-dhaqankooda waxaa ka muuqda inay ku heshiiyeen inay;wadar ahaan isugu hiiliyaan, wada-qaraabtaan, kalana qaraabtaan. Waxaad arkaysaa ayagoo Go’aanka Maxkamadda Sare wadajir uga soo hor-jeesanaya, miisaaniyadda dawladda si aqlibiyad ah u hor-istaagaya oo shuruudo daneed (gaar ah) ku xiraya, isla markaana koox koox ahaan (10-12 Xildhibaan) u qaraabanaya oo Wasiirada sida kan Dastuurka iyo kan Arrimaha Dibedda mooshin ka keenaya.
Hawlo mudnaan gaar ah ee qaran leh, sida dhammeystirka qabyo-qoraalka dastuurka iyo kuwo kale oo badan oo saameyn ku leh masiirka dadka iyo mustaqbalka dalka baa u yaal Baarlamaanka 10aad oo dhalashadiisii iyo dhaqankiisaba saluugmo badani ka muuqdo.
Allow Soomaliya ka caymi hagar-daamada gudaha oo ugana hiilli halista cadawga dibedda.
DAAWO SAWIRRO:-Kheyre Oo Xariga Ka Jaray Xabsiga Guud Ee Muqdisho Iyo Maxkamad Casri Ah
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), Mudane Xasan Cali Khayre oo ka qayb galay ...
DHAGEYSO+SAWIRRO:-Xaaf oo mar kale dhaliilay Dowladda Somalia
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf ayaa oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Gaalkacyo ...
Maxaad ka ogtahay magaalada qurba-joogta looga soo Duceeyo
Waxaan safar ku joogay baryahaan dagmada Garbahaareey ee gobalka Gedo. Maalinti shalay ahayd ...